श्रीनिवासाचार्य गुरुको गोरु वुद्धी – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
एउटा गीतमा चारवटा रोल, सुस्मा खनालको अदभुत कला क्षमता
अन्तर्राष्ट्रिय धावक श्रेष्ठ ‘अभियानश्री’ पदकबाट सम्मानित : नेपाल तेक्वान्दो संघ, प्रदेश नं ३ द्वारा बधाई
डी.सी. मेट्रो सप्ताह महापुराण आयोजक समितिको प्रेस विज्ञप्ति
ओली, प्रचन्ड र देउवालाई मृत्‍युदन्ड दिनुपर्छ !
सान-फ्रान्सिस्कोमा २९७औं राष्ट्रिय एकतादिवस तथा पृथ्वी जयन्ती सम्पन्न
समाजसेवी सबिता उप्रेती सम्मानित
डिसीमा नेजाको सामुदायिक अन्तर्कृया कार्यक्रम सम्पन्न
चलचित्र चङ्गा चैट, १९ जनवरीमा लस एन्जलसमा देखाईने
टेक्सासको लवकमा आईडल जज काली बॉस्कोटाको धमकेदार प्रस्तुती
महाबीरको केन्द्रलाई महावाणिज्यदुत महतद्दारा महिनाको दश हजार दिईने
गोकर्णेश्वरको महांकाल मन्दिरमा माघ ११ देखि श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ
हकरको यात्राले स्थापित गरेको सफल नेपाली-अमेरिकी ब्यवसायी : दिनेश साह
‘तिमी राजा बन’ भन्नु हो भने त्यो माओ स्टाइलको जुल्फी खौरेर भोलि श्रीपेच लगाउन तयार हुन्छन्
अमेरिकामा ह्यारी भण्डारीद्दारा ‘वेद’ साक्षी राखेर राज्य प्रतिनिधीको शपथ
क्यालिफोर्नियामा पृथ्वी जयन्ती मनाउन सम्पूर्ण तयारी पूरा
डिसी मेट्रो महापुराण – २०१९ को तयारी बैठक
तामाङ समाज, अमेरिकाद्वारा सल्लाहकार समिति गठन
श्रीनिवासाचार्य गुरुको गोरु वुद्धी
प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०७५, सोमबार
मोरङ – केहि हप्ता पहिले धार्मिक गुरु श्रीनिवासाचार्यमाथि एकाएक गोली बर्षियो । उनलाई तत्काल उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइयो । भाग्यले उनी बचे पनि । हिन्दुधर्मका धार्मिक गुरुमाथि गोली प्रहार भएपछि हिन्दु धर्मालम्बीहरुले कडा भत्र्सना मात्र गरेनन्, तत्काल दोषीलाई पक्राउ गरी कारवाही नगरे जे पनि हुने चेतावनी समेत दिए ।
त्यसैअनुरुप नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टीका नेताहरुले पनि गोली प्रहार काण्डको विरोध गर्दै तत्काल दोषीलाई कारवाही गर्न माग राखे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी अरुणकुमार विसी पनि के कम ? तत्काल उनले गोली प्रहार गर्नेको खोजी गर्न मातहतलाई निर्देशन दिए । प्रहरीले गोली प्रहार गर्ने अभियुक्त खोज्ने क्रममा चितवन भरतपुर वेलचोकका २९ बर्षीय माधव चौधरी र नवलपरासी गौडाकोट–५ का ३२ बर्षीय सन्तोष भन्ने लक्ष्मीराज अधिकारीलाई पक्राउ गर्यो ।
पक्राउ परेका चौधरी र अधिकारीले धार्मिक गुरु श्रीनिवासाचार्य योजना मुताविक उनीमाथि गोली प्रहार गरेको बयान दिए । त्यसपछि प्रहरी नै तीन छक मानत्र परेनन्, तत्काल धार्मिक गुरुलाई पक्राउ गर्नुपर्ने देखिएपछि उनको खोजीमा लागे । त्यतिबेलासम्म उनी राजधानी आइसकेका थिए । उनलाई काठमाडौंबाट आइतबार पक्राउ गरियो ।
‘धार्मिक गुरु श्रीनिवासचार्यले आफूमाथि गोली प्रहार गर्न लगाएर उनी धार्मिक हिंसा भड्काउन चाहान्थे । चौधरी र अधिकारीका बयानपश्यात हामीले उनलाई समेत दोषी देखेपछि पक्राउ गर्न गरेका हौं ।’–पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसपी अरुण विसीले भने । श्रीनिवासले आफूलाई गोली हान्न उनकै अंगरक्षक चौधरीलाई लगाइएको थियो । गोली हातमा हान्ने योजना थियो । तर दुुर्भाग्यवश गोली उनको बायाँ छातीमा लाग्यो ।
उनी भर्खरै उपचार गरी घर फर्केर भारत जाने तयारीमा थिए । आफू पक्राउ पर्ने चाल पाइसकेका कारण उनी भारत भाग्ने तयारीमा थिए । तर मोरङ प्रहरीको सफल अनुसन्धानबाट धार्मिक गुरु स्वयम् आफैले खनेको खाल्डोमा आफै फसे । अन्ततः उनी अहिले प्रहरीको खोरमा परेका छन् । अनुत्तरित प्रश्न–यदि उनी धार्मिक हिंसा भड्काउन चाहान्थे भने त्यसको ग्राण्ड डिजाइनर को हुन् ? उनलाई कसको साथ र सहयोग रहेको छ ?
भर्जिनिया - नेपाली लोकगीत तथा दोहोरी गीत क्षेत्रका अग्रज कलाकार एबम पत्रकार रामप्रसाद खनालकी.. ...
नेपालको एथलेटिक्स खेलका पुर्ब अन्तर्राष्ट्रिय धावक यज्ञलाल श्रेष्ठ अमेरिका स्थित.. ...
भर्जिनिया - यही December 29 तारीख़ 2018 शनिवारका दिन डीसी महानगर क्षेत्रको भर्जिनिया फेयरफ्याक्सको Chantilly.. ...